सुहागरातमा श्रीमती हातमा दुध लिएर कोठमा छिरेकी मात्र थिइन्, पतिको यस्तो हर्कत देखेर चकित परिन ! – Khabaarpati
November 25, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on सुहागरातमा श्रीमती हातमा दुध लिएर कोठमा छिरेकी मात्र थिइन्, पतिको यस्तो हर्कत देखेर चकित परिन !
त्योमेरो बिहेको रात थियो। पहिलो पटक म एउटा पुरूषसँग नजिक हुँदै थिएँ। मेरा एकदमै मिल्ने साथीहरूसँग गरेका कुराकानी सम्झिँदै मेरो दिमागमा सपना र चाहनाका अनेकौँ तस्वीरहरु घुमिरहेका थिए। म हातमा एक गिलास दूध लिइ टाउको निहुराएर कोठामा प्रवेश गरेँ। त्यो पूरै परम्परागत शैलीमा थियो जस्तो मैले कल्पना गरेकी थिएँ। तर मैलै सोचेकै थिइनँ एउटा कहालीलाग्दो आश्चर्य मलाई पर्खिरहेको थियो। वास्तवमै एउटा भयङ्कर निराशाजनक। कल्पनामा म कोठा छिर्दा मेरा पतिले मलाई दह्रोसँग अंगालो मारून् भन्ने चाहन्थेँ, निस्सासिने गरी चुम्बनहरू गरून् भन्ने सोच्थेँ र रातभर मलाई माया गरून् भन्ने चाहन्थेँ। तर वास्तविकतामा म कोठामा पुग्दा उनी निदाइसकेका थिए।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
मेरो मुटु प्रेम र चाहनाका लागि जलिरहन्थ्यो। तर म एक्लोपनले घेरिएकी थिएँ। बेला–बेला मलाई लाग्थ्यो कि म मोटी भएकीले यस्तो भएको हो। के पुरूषहरू मोटी महिलालाई घृणा गर्छन् ? के मेरो तौल नै मैले विवाहका लागि उपयुक्त केटा नपाउनुको कारण हो ? के म साँच्चै नै जीवनभर एक्लै रहनुपर्छ ? के म सधैँ कुमारी नै रहन्छु ? यस्ता प्रश्नहरू हरबखत मेरो दिमागमा खेलिरहन्थे। अन्ततः जब म ३५ वर्षकी भएँ। कसैगरी ४० को दशकका एक पुरूष विवाह गर्न आए। हाम्रो कुरा छिन्ने बेलामा मैले मेरा भावना उनीसँग व्यक्त गरे। तर उनले न ध्यान दिए न त जवाफ। उनी अत्तालिएको जस्तो लाग्यो। भुइँतिर निहुरिएर उनी चुपचाप बसिरहे, टाउको पनि खासै माथि उठाएनन्।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
के मेरो मोटोपन नै उनको त्यस्तो व्यवहारको कारण थियो ? के दबाबमा परेर उनले मसँग बिहे गरेका थिए ? मलाई आफ्नो पीडा कसलाई सुनाऊँ थाहा थिएन। मेरो आफ्नो परिवार म नयाँ जीवनसँग खुशी थिएँ भन्ने भ्रममा थियो। तर मेरो धैर्यको बाँध टुटिरहेको थियो र मलाई एउटा समाधान चाहिएको थियो।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
उनी र उनका परिवारलाई सबै थाहा थियो। तर मलाई थाहा नदिएर उनीहरूले मलाई धोका दिएका थिए। मैले थाहा पाएपछि उनलाई लज्जा महसुस भयो। यद्यपि उनले माफी मागेनन्। एकजना महिलाले गर्ने सानो गल्तीलाई पनि समाजले बढाइचढाइ गर्छ। पुरूषको गल्ती हुँदा पनि महिलातिर औंला तेर्स्याइन्छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
मेरा पतिको परिवार निर्लज्ज थियो। सम्बन्ध विच्छेद हुनुको वास्तविकता लुकाउन उनको परिवारले ममाथि अवैध सम्बन्ध राखेको आरोप लगायो। मेरो लडाइँको क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण पनि गराएँ। मलाई तीन वर्ष लाग्यो र अन्ततः सम्बन्ध विच्छेद भयो।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,